အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ — Steemkr
phyo45 in esteem
အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျ ကျွန်တော် steemit နဲ့ဝေးကွားနေတာတော်တော်ကြာပါပြီး။ steem ဈေးကျတာရော sbd ဈေးကျတာရော် တခြားသောလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရှုပ်နေတာလဲပါပါတယ်။ ဟိုခရီးသွားလိုက် ဒီခရီးသွားလိုက်နဲ့ steemit မှာစာရေးဖို့ စီစဉ်ပါသေးတယ်။ အချိန်မရတာနဲ့ စာမရေးဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ cryptocurrency တွေလဲဈေးကျတာလဲ ပါတာပေါ့။ အဓိကအားဖြင့်တော့ စိတ်ဓာတ်ကျသွားတာလဲပါတာပေါ့။ steemit ဘက်ကိုမလှည့်ဖြစ်တာ 2လကျော် 3လနီးပါးပြည့်တော့မယ်ထင်ပါ့။ နောက်တစ်ခုက အဖွဲ့အစည်းလည်မရှိတော့ voting တွေလဲမရတာနဲ့ စာရေးဖို့ အားအင်းမရှိတာလဲ ပါပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ steemit မိတ်ဆွေတွေလဲ steemဖက်မှာသိပ်မရှိတော့တာနဲ့ steemit ဘက်ကို သိပ်ပြီးအာရုံမထားနိုင်ခဲ့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။တချိူ့ steemit မိတ်ဆွေတွေလဲရှိနေပါသေးတယ်။အားလုံးကိုလဲ upvote ပေးဖို့စတင်ပါပြီး။ I am Khaylay
esteem introduceyourself steem
anonyvoter56 · 2년 전
Welcome to Steem @phyo.
Welcome to Steem phyo! Partiko is officially the fastest and most popular mobile app for Steem. Unlike other Steem apps, we take 0% cut of your earnings! You can also be rewarded with Partiko Points while using Partiko and exchange Partiko Points for upvotes!